Saturday, November 17th, 2018 - 16:35:56
Man City oo heshiis la gaartay Vitinho, waa kuma?
0 Wednesday October 21, 2015 - 16:56:49
Kooxda Man City ee Horyaalka England ayaa heshiis la gaartay Laacibka Victor Moura oo lagu naaneyso Vitinho, haddii aad is weydiineyso muxuu yahay waxay faafaahin ku jirtaa warbixinta hoose.
Arsenal & Man Utd oo ku dagaallamaya Saxiixa Pato
0 Thursday October 15, 2015 - 11:14:17
Kooxda Horyaalka Brazil ee Corinthians ayaa ku dooneysa Laacibkeeda Alexandre Pato lacag dhan £18.5million haddii ay doonayaan Manchester United iyo Arsenal.
Arsenal oo £40m ku raadianeysa Henrique, Waa nin Nuucee ah?
0 Sunday October 11, 2015 - 07:59:45
Arsenal ayaa waxaa ay la xiriirtay Kooxda Botafogo, laacibka ka tirsan ee Luis Henrique.
Alexis Sanchez oo shaki uu ku jiro inuu Brazil ka hortagi karo kadib dhaawac soo wejahay
0 Thursday October 08, 2015 - 14:57:06
(Kubadbile) Chile layliyaheeda Jorge Sampaoli ayaa tibaaxay in Alexis Sanchez uu shaki ku jiro safashadiisa kulanka Chile iyo Brazil dhexmari doona ee loogu loolamayo usoo bixida Koobka Adduunka 2018ka.
Sanchez & Vidal oo Seegaya Kulanka Chile vs Brazil, Sababtu maxay tahay?
0 Thursday October 08, 2015 - 10:31:31
Xiddigaha Boosaska dhexe iyo Weerarka ee Dalka Chile Alexis Sanchez iyo Arturo Vidal ayaa seegi doona Kulanka Xulkoodu uu la qaadan doono dhiggiisa Brazil.
Samir Nasri oo tilmaamay halka uu mustaqbalka ka dheeli doono
0 Wednesday October 07, 2015 - 21:47:32
(Kubadbile) - Laacibka khadka dhexe ee Manchester City Samir Nasri ayaa qishay in uu mustaqbalka ka dheeli karo horyaalka Mareykanka ee MLS-ka.
Icardi oo xaaskiisa u doortay in ay wakiil ka noqoto
0 Tuesday October 06, 2015 - 20:21:46
(Kubadbile) - Kabtanka Inter Milan ayaa la soo warinayaa in uu shaqadda ka eryey wakiilkiisii Abian Moreno oo xilkaas u maga-cawday xaaskiisa Wanda Nara.
Cafu oo kamid noqday tababarayaasha Brazil fariina diray
0 Tuesday October 06, 2015 - 14:02:02
(Kubadbile) Ninka labada jeer qaranka Selecao kula guuleystay Koobka adduunka Cafu, ayaa loo magacaabay Tababare sharafeed marti ah oo qaranka Brazil kala qeyb gali doona kulamada ay bishan dheelayaan.
Walaalka Messi oo la dagaalay booliska isaga oo lagu qabtay qori
0 Monday October 05, 2015 - 18:55:44
(Kubadbile) - Walaalka Lio Messi ayaa la dagaalay booliiska markii ay isku dayeen in ay baaraa baabuurkiisii uu watay.
Orlando City oo raadineysa CR7, kooxo waaweyna loo diidye mala siin doonaa?
0 Visits: 548 | Thursday October 01, 2015 - 15:48:04
Koox ka dhisan Horyaalka MLS-ka Mareykanka ayaa raadineysa Saxiixa Laacibka Real Madrid.
Roberto Firmino oo laga saaray liiska qaranka Brazil, Maxayse tahay sababtu ?????
1 Friday September 25, 2015 - 03:03:40
(Kubadbile) Weeraryahanka kooxda Liverpool Roberto Firmino ayaa laga saaray Liiska ciyaartoy ee qaranka Brazil metalaya bisha inagu soo fool leh kulamada ay dheelayaan.
Tevez oo ka xun dhaawac halis ah uu u geystay ciyaaryahan kulan ka tirsan horyaalka Argentina
0 Sunday September 20, 2015 - 08:13:03
(Kubadbile) Laacibkii hore ee kooxda Juventus Carlos Tevez oo iminka ka dheela dalkiisa hooyo ayaa aad uga xumaaday markii uu dhaawac halis ah oo jabniin horseeday uu u geystay laacib lagu magacaabo Ezequiel Ham.
LABA JEER AYUU KA SOO MUUQDAY HOLLYWOOD-KA: Beckham ma jilaa ayuu isu badalay...? Isaga ayaa kuu jawaabaya
0 Saturday September 19, 2015 - 18:49:14
(Kubadbile) - Kubadd dheelihii hore ee England David Beckham ayaa cadeeyey in uusan doneyn in uu ku biiro saaxadda jilniinka .
Waqtigii Thiago Silva ee Brazil ma dhammaaday?
0 Visits: 497 | Friday September 18, 2015 - 15:21:41
Sanadkii lasoo dhaafay Thiago Silva ayaa hoggaaminayay Brazil marka laga hadlayo Koobkii Adduunka ee Dalkooda ka dhacay, waxaase mar qura laacibkan laga waayay Safkii Xulkiisa.
Oscar oo ku jira Safka Xulka Brazil & Neymar oo aan ku jirin, Sababta?
0 Thursday September 17, 2015 - 18:56:36
Booska dhexe ee Kooxda Chelsea ayaa kala mid Noqonaya Safka Xulka Brazil saaxiibkiis Philippe Countinho oo ka mid ah 23-ka ciyaartoy ee Wajahaya Chile iyo Venezuela October is reereebka Koobka Adduunka.
Taageerihii cajiibka ahaa ee Brazil oo geeriyooday
0 Thursday September 17, 2015 - 18:05:06
(Kubadbile) - Taageerihii cajiibka ahaa ee Brazil Clovis Acosta Fernandes u geeriyooday cudurka Cancer isaga oo jira 60-sano.